प्रमोसन गरिनस् भनेर मेरो गीत अर्कैको नाममा राखियो « paniphoto
« भुकम्पमा पुर्वतयारीले कत्ति फरक पार्छ । तर खै त पुर्वतयारी ? अनौठो संस्कार »	प्रमोसन गरिनस् भनेर मेरो गीत अर्कैको नाममा राखियो
By -पानीफोटो- on Sunday January 15, 2012	-शिव पँलास, गीतकार-गीत मानविय संवेदना र अनुभुतिको कोमल र लयात्मक प्रस्तुति हो । जीवनलाई निकै नजिकबाट चियाउँन सक्ने भएकाले मैले सानैदेखि गीत लेख्न सुरु गरेको हुँ । मेरा एक दर्जन गीतहरु रेकर्ड भइसकेका छन् । शिशिर योगीको स्वर तथा बीबी अनुरागीको संगीतमा रेकर्ड भएको माया गर्नुको अर्थ सिउँदो भर्नु होइन ले चार बर्ष अगाडी नै मलाई गीतकारका रुपमा चिनायो । यसबाहेक आधुनिक गीती एल्बम सप्तक, तिमी, निष्पट्ट र आउँदै गरेको खेम गुरुङको एल्बममा पनि मेरा केही गीतहरु समावेश गरिएका छन् ।
यसले अरु गीतकारहरुलाई झै मलाई पनि परिचय दिएको छ । भाइब्स् क्रियसनले बजारमा ल्याएको सन्तोष कोन्मेको पहिलो एल्बम मृत्युपछि ले भने मलाई पीडा दियो । यस एल्बममा कोमल हातमा र सुटुक्क मन गरी मेरा दुई गीतहरु छन् । विडम्बना, कोमल हातमा गीतको अडियोमा गीतकार शिव पँलास र भिडियोमा गीतकार भनेर गायक स्वयमको नाम उल्लेख गरिएको छ ।
अडियो कभरमा मेरै नाम उल्लेख भएपनि भिडियोमा भने उनले जानीजानी उनको नाम राखेर सार्वजनिक गरेका हुन् । यस बिषयमा बुझ्न खोज्दा उनले मलाई गीतकार बनाएर कृपा गरेको र एल्बमको प्रमोसनमा सहयोग नगरेकोले मेरो नाम नराखेको बताए । मलाई लाग्छ, यो धेरै गीतकारको पिडा हो । मेरो आफ्नै सृजना अर्काको नाममा सार्वजनिक हुँदा पनि मैले गर्न सक्ने प्रभावकारी उपाय छैन ।
सो एल्बममा मेरो मात्र होइन । युवा संगीतकार प्रदीप रानाले उक्त एल्बममा दुई गीतमा संगीत दिएका छन् । तर कोन्मेले एक गीतमा मात्र रानाको नाम उल्लेख गरी अर्कोमा आफ्नै नाम उल्लेख गरेका छन् । क्षणीक आवेग र केही आर्थिक लगानीकै भरमा सिर्जनामाथिको अत्याचारले मलाई गम्भिर, सोचमग्न र मर्माहत बनाएको छ । Tweet
« भुकम्पमा पुर्वतयारीले कत्ति फरक पार्छ । तर खै त पुर्वतयारी ? अनौठो संस्कार »	6 comments to प्रमोसन गरिनस् भनेर मेरो गीत अर्कैको नाममा राखियो
· जवाफ दिनुहोस्	लौ यस्तो पनि हुन्छ है । पतित कलाकारहरु ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	विकाश मिश्र
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	बबिता मानन्धर
· जवाफ दिनुहोस्	कोन्मे जस्ता कलाकार रहुञ्जेल नेपाली गीत संगीत कहाँ माथि उठ्छ । सालाहरुलाइ लात हान्दै भगाउँनु पर्ने ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	मदनमोहन न्यौपाने
· जवाफ दिनुहोस्	लेख पढ्दा गीतकारमाथि अन्याय भएकै हो जस्तो लाग्छ । तर प्रमाण नभए पछि लेख अलिक खल्लो झै लाग्छ । कृपया प्रमाण पनि दिए राम्रो हुन्थ्यो ।
यही Category बाटसेतो धरती र मेरो भ्रमदण्ड दिने अधिकार पनि छ भन्ने बिर्सियो राज्यलेनेपालमै पेट्रोलभन्दा महंगो पानीहेरिनसक्नुको लाजमर्दो नाच !सबै कुरा हामीले गर्ने भए सरकारले चै गर्छ के ?काठमाण्डौं विश्वविद्यालय छात्रावास – महंगो, सुविधाविहिन र असुरक्षितराजनिती ! राजनिती !! राजनिती !!!विद्यार्थी भरिया हुन् र ?जिम्मेवारी त लिएनौं, कम्तिमा सुनि त देउ !मिहिनेत अनुसारको नम्बर किन आएन ?Online Users4 Users Onlineसन्दर्भ सूचि	अलगधार